China iphepha ibhakede Ukwakha futhi Factory | JAHOO
Ukucaciswa komkhiqizo Ubukhulu Bento Ubukhulu Bempahla Iphakheji Usayizi ku (cm) Popcorn & Fried Chicken Paper Ibhakede 32oz 11.6 * 8.9 * 14.5 230g + 18pe 10pks * 50pcs 60 * 25 * 57 46oz 12.0 * 8.9 * 17.7 230g + 18pe 10pks * 50pcs 62 * 26 * 59 64oz （amafushane namafutha） 16.7 * 13 * 13.7 ...
Usayizi wecala ku (cm)
Ibhakede Lephepha Lezinkukhu Elithotshiwe
64oz （amafushane namafutha）
64oz （mude futhi mncane）
Ama-350 + PE angashadile
Inkukhu ethosiwe. Ibhakede lephepha elilahlayo. Ukuhambisa nokuphaka inkukhu ethosiwe nokunye ukudla okushisayo. Iphathwe iphepha lokumelana nokungena kwamafutha nokuvuza.
Kungaba ukudla okulondolozekayo noma ukudla okusha, lapho udinga ukuthengisa noma ukuhambisa ukudla noma uthi uma ufuna ukuhlinzeka ngezinsizakalo zokulethwa kwasekhaya kokudla lapho ukupakisha kwephepha kungangena kahle impela.
Iphepha elenziwe ngamaphakethe okudla lilungele kakhulu ukudla kanye nemikhiqizo yabathengi emakethe.
Ngobuchwepheshe bethu bamuva, ukufakwa kwephepha sekuyisihluthulelo sokugcina nokuthengisa imikhiqizo yokudla emakethe ngokuqina okungaguquki. Esinye sezici ezinkulu okufanele sizikhumbule ngenkathi uthengisa into ebucayi njengokudla ukuqinisekisa ukuthi ikhwalithi yayo ihlala ingantengantengi futhi ukupakisha kwephepha lokudla kuyasiza.
Kunokufunwa okuningi kwalolu hlobo lokupakisha embonini yokudla.
Izinkampani eziningi ezinkulu zincike embonini yokupakisha ukuhlinzeka ngamaphakeji afanele emikhiqizo yazo.
Langaphambilini isikhwama sephepha
Popular othosiwe inkukhu iphepha ibhakede ukudla okusheshayo cu ...